CAREYS CIISE KAARSHEDOWNLOAD FOR MAC
Naxariistii Jano illaah ha ka waraabiyee Careys Ciise wuxuu ahaa ruux af-gaaban, waxse balaarneyd xigmaddiisa maanseed ee Eebbe ku manaystay, mana ahayn dadka wax ku allifa qoraalka, ee wuxuu ahaa dadka aan u fikirin maansada oo markii uu doonaba soo gaddiyo xigmadda maskaxdiisa ka buuxdo. Waxaa kale oo uu halkaa ka tiriyay Saar ku saabsan waxa uu Ingiriisku u hortaagan yahay xornimada N. Muuqaalka Akhri Wax ka bedel Wax ka bedel xogta Itusi taariikhda.
Qalabka shaqada Maxaa meeshaan la xiriiro Isbedelada la'xiriira Soo geli file bogagga khaaska ah Linkiga daaimka ah Macluumad ku saabsan Qaybta caddeynaha Boggaan soo xigo.
Maalintaas taariikhdu waxay ahayd dii Maalin Arbaca ah, waxaana isla markii loola cararay Isbitaalka Xoogga, halkaas oo uu ku nafwaayay dii. Careys Ciise wuxuu ahaa nin aad u nadaafa jecel had iyo goorna wuxuu xiran jiray oo u caada ahayd Macawis, Shaar gacma dheer ah, kabaha nooca loo yaqaano sandalka, Koofiyad, Cimaamad uu garabka saarto iyo ul xardhan oo aad u quruxsan.
Xarun magaceedyada Bog Wadahadal. Careys Ciise Af-maal nimada ka sakow wuxuu ahaa nin Wadani ah oo mar kasta jecel bulshaweynta Soomaaliyeed in uu waajibka saaran ee Qaranimo ku booriyo, ugana digo wax kasta oo uu isleeyahay waa qalad.
Careys Ciise Maalin Maalmaha ka mid ahayd isaga oo gudanaaya shaqadiisii tababarka ahayd, ayaa wadna-xanuun ku soo booday. Careys Ciise in kasta oo uu dhintay, maantana nala joogin oo noo muuqan, haddana Taariikhda Suugaaneed ee Ummadda Soomaaliyeed marnaba lagama yaabo in ay hilmaanto kaalinta lama ilaawaanka ah ee uu ka galay. Xafladaas waxaa ka soo qeeb galay Wariirka Gaashaandhiga iyo Wasiirka Warfaafinta, Ujeeddada waftigana waxay ahayd inay kala qayb galaan dadweynaha ku nool Gobolka Jubbada Hoose, fantasiyaha damaashaadka maalinta kowda Luuliyo.
Careys Ciise wuxuu ahaa xoola raac si walba ula qeybsaday dhib iyo dheefba beesha uu la noolaa. Qoralka waa la heli karaa sida uu qabo Ruqasadda Commons ee hindisidda ee marka loo eego la midka ; waxaa soo hoos gali kara qodobo kale. Naxariistii Jano illaah ha ka waraabiyee Careys Ciise wuxuu ahaa ruux af-gaaban, waxse balaarneyd xigmaddiisa maanseed ee Eebbe ku manaystay, mana ahayn dadka wax ku allifa qoraalka, ee wuxuu ahaa dadka aan u fikirin maansada oo markii uu doonaba soo gaddiyo xigmadda maskaxdiisa ka buuxdo.
Careys wuxuu ifka kaga tagay qoys ka kooban lix qof. Waa taariikh aad u fiican in wax laga ogaado ee fadlan haddii aad jeceshahay inaad wax ku darted raaci bogga hoose si aan wax uga ogaano ku darniinkaada. U Careys Ciise Kaarshe oo ahaa saaryahan weyn oo Soomaaliyeed wuxuu Ku dhashay tuulo u dhaw kismaayo careeys wuxuu ahaa geesi buuxa oo waliba gobanimadu kala weyntahay waxkastoo yaala guudka dunida.
Careys Ciise fagaarahaas wacdaro aan la soo koobi kareyn ayuu ka muujiyay, wuxuuna tiriyay saar ku saabsan Munaasibada kowda Luuliyo.
Boggan waxaa markii ugu ciize wax laga bedelay Fadlan Waxba haka qorin sida: Illaahay ha u naxariistee wuxuu ahaa nin aad u deggan oo iimaan wanaagsan, hammigiisuna wuxuu ahaa Qaranimo, waddaninimi iyo Hagaajin dhaqan. Careys Ciise wuxuu Fanaaniinta Waabari ku soo biiray amaba ka mid noqday lixdameeyadii markii labada gobol ee Soomaaliyeed Midoobeen. Eeg Shuruudaha adeegsiga ee faahfaahinta.
Careys Ciise Karshe - Wikipedia
Reeraha ama Qabiilada hoose ama Jilibyada iyo wixii la hal maala. Taasaana keentay in lagu xuso Qoraal kasta oo laga qoro Suugaanta Soomaaliyeed.
Waad ku mahadsantahay isfahanka. Fadlan aqri Qodobada raacsan wax kasii ogaanshaha wikipedia. Fadlan si cilmiyaysan u qor bogan. Mahadsanid Careys Ciise Kaarshe waxa uu ahaa saaryahan weyn wuxuu ku dhashay magaalada dhuusamareeb, Saarka Hooyadu waa lama huraan.
Careys wuxuu ka mid noqday Kooxda Waabari markii uu wacdaro layaab leh ee Suugaaneed uu ka muujiyay Munaasibaad lagu xusayay isku darkii labada gobol Waqooyi iyo Koonfur, Xafladaasoo lagu Maamusayey israaca Labada Gobol laguna qabtay Gobolka Jubbada Hoose Magaalada Kismaayo. Waxaa kale oo uu halkaa ka tiriyay Saar ku saabsan waxa uu Ingiriisku u hortaagan yahay xornimada N.
Waxaa laga keenay " https: Careys inkastuu ahaa nin waayeel ah, haddana niyadiisu aad iyo aad ayey uga wanaagsaneed kan dhallinyarada, wuuna ka firfircoonaa mar kastana wuxuu jeclaa in uu ilaaliyo Magaca kooxdiisa Waabari. Muuqaalka Akhri Wax ka bedel Wax ka bedel xogta Itusi taariikhda.
Waftigii waxaana ka qeeyb ahaa suugaan-yahanadii madasha ka hadlay Careys Ciise iyo koox dumar ah oo isaga kkaarshe, watana dharkii Hiddaha iyo dhaqanka aanu u lahayn.
Intaa waxaa u wehelisay in uu Quraanka Kariimka ah si fiican u yaqiin maadaama uu ahaa wadaad. Careys Geeridiisii Ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto aad ayey uga murugoodeen, xabaashiisiina si fiican oo sharaf iyo xurmad mudan ayaa kaarshr qabanqaabiyay, loogana soo qeyb galay.
Fadlan isku day inaad qortid wax nuxurleh oo la fahmi karo.
Author KagazuruPosted on 03.08.2018 03.08.2018
4 thoughts on “Careys ciise kaarshe”
Moogukus on Careys ciise kaarshe